I-Georgia Visa kwi-Intanethi | I-Georgia eVisa | natvisa.com
Isicelo seGeorgia Visa kwi-Intanethi
I-Visa eku-intanethi eya eGeorgia inokufumaneka kwi-eVisa portal yoMphathiswa Wezangaphandle WezaseGeorgia ovumela ukuba uhambo lwase-Georgia luhambe nje. Ukutyelelwa kwexesha nje elifutshane kunikezelwa ngokulula ngale nkqubo ngaphandle kwesidingo sokuya kwindlu yozakuzo yaseGeorgia. Abantu abanqwenela ukufumana i-visa yase-Georgia kwi-intanethi bayacelwa ukuba bazalise iinkcukacha ezisisiseko zobuqu kunye nezokuhamba kwaye bahlawule online. Ukuvunywa kwesicelo se-Visa eGeorgia kwaziswa nge-imeyile. Umhambi kufuneka afumane ikopi eprintiweyo ye-eVisa yokuyisebenzisa xa uhlala eGeorgia.
Abahambi abenza isicelo se-eVisa eGeorgia kufuneka bangenise amaxwebhu athile kunye nefom yesicelo. Bamele banikeze ikopi yamaxwebhu angqina injongo yabo yokutyelela eGeorgia; impilo / i-inshurensi yengozi, i Ikopi ekhutshiweyo yepaspoti ngemihla yokuhamba kunye a Ifoto yomenzi-sicelo.
Ubungqina bendawo yokuhlala
Xa besenza isicelo se-eVisa eGeorgia, abafaki-zicelo kufuneka banikeze uxwebhu oluza kubonisa imeko yabo yokuhlala. Olu xwebhu lunokubhaliswa ehotele, kwindlu yeendwendwe okanye kwihotele. Olu xwebhu luza kunceda abasemagunyeni ukuba babone ukuba undwendwe luhlala phi, xa kunokwenzeka ukuba bafikelele kuye.
Ukuya kwilizwe langaphandle kufuna isixa semali esihle kwaye urhulumente waseGeorgia uyaqinisekisa ukuba abantu bamanye amazwe abatyelele eli lizwe banemali eyoneleyo kunye nabo. Ukuqinisekisa oku, abafaki-zicelo kufuneka banikezele ngeengxelo zemali kwiibhanki zabo.
Elinye lawona maxwebhu abalulekileyo ekufuneka uwathathe ukuze wenze isicelo seVisa eGeorgia yipasipoti esemthethweni. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ipaspoti oyiphetheyo kufuneka isebenzela a ubuncinci bexesha leenyanga ezintathu. Ukongeza koku, ipaspoti kufuneka ibe nephepha eli-1 elingenanto kuyo. Oku kukuqinisekisa ukuba iphepha linokufakwa isitampu ligunya ekungeneni kwakho.
Iinkcukacha ze-Georgia Visa
Yintoni iGeorgia eVisa?
Ucwangcisa utyelelo eGeorgia? Uxwebhu lokuqala olufuneka ukuba umhambi afune ukungena kweli lizwe langaphandle ngokusemthethweni i-visa. Inkqubo ye-Visa ye-elektroniki yase-Georgia yaqala yaziswa yi-Ofisi yoMphathiswa Wezangaphandle e-Georgia, neyenze ukuba abemi bamazwe angaphezu kwama-60 bafaneleke i-eVisa. Ngale Visa, abakhenkethi abasuka kumazwe ahlukeneyo banokundwendwela eGeorgia kwaye banokuhlala apho ithuba elingangeentsuku ezingama-30 okanye ezingama-90, kuxhomekeka kuhlobo lwevisa ukuba benze isicelo. Nje ukuba ifom yesicelo yamkelwe, isusa isidingo sokuba abantu batyelele I-Ambassia okanye bamele emgceni we-visa. Iifom zesicelo kulula ukufumana kuzo kwi-intanethi kwaye kuthatha kuphela imizuzu embalwa ukuyigqiba yonke inkqubo.
Amanyathelo okufaka isicelo se-eVisa yase-Georgia
Ukufumana i-eVisa ayiseyongxaki kwaye ichitha ixesha. Ngamanyathelo ama-3 alula, unokufumana i-eVisa yakho yaseGeorgia.
Gcwalisa ifomu lesicelo: Qalisa inkqubo yesicelo ngokukhuphela ifom yesicelo sevisa. Awudingi kuma kulayini omde ukuze ufumane le fomu, uyikhuphele kwiwebhusayithi karhulumente. Ingcaciso oyinikezayo ngelixa ugcwalisa ifom yesicelo kufuneka ihambelane naleyo yokundwendwela.
Ungeniso lwamaxwebhu: Emva kokugcwalisa ifom yesicelo, qhubeka uye kwinyathelo elilandelayo, elileli lokungenisa amaxwebhu. Uyacelwa ukuba uvavanye amaxwebhu kwaye ulayishe iikopi kwifom yesicelo. Qinisekisa ukuba kukho ukucaca kumaxwebhu askeniweyo.
Yenza intlawulo: Inyathelo lesithathu nelokugqibela lenkqubo yokwenza isicelo se-visa kukuhlawula umrhumo wevisa. Unokwenza intlawulo ngokulula usebenzisa ikhredithi esebenzayo okanye ikhadi lebhanki. Uya kufumana i-eVisa yakho kwi-imeyile yakho ye-imeyile nje ukuba yenziwe ngempumelelo.
Abahambi bayakufumana i-eVisa yabo kwi-ID yabo ye-imeyile, nje ukuba igqitywe ngempumelelo. Ukufika kwabo eGeorgia, iindwendwe ziyacelwa ukuba zizise incwadi yazo yokundwendwela, i-eVisa, ubungqina betikiti labo lokubuyela, i-inshurensi yezempilo kunye nokugcinwa kwehotele kwabasemagunyeni kwisikhululo seenqwelomoya. Emva kokuba amaxwebhu abo ehloliwe kwaye elungisiwe, iindwendwe ziya kuvunyelwa ukungena elizweni.
Ngubani ofuna ivisa yaseGeorgia?
Njengoko sele kuchaziwe ngaphambili, i-Visa yakho yeyona ncwadi ibalulekileyo yokuhambela kwelinye ilizwe. Ke ngoko, uninzi lwabemi kwilizwe lonke lufuna ivisa, xa betyelele ilizwe. Nangona kunjalo, ukukhululwa kwenziwa kubemi bamazwe athile. Abemi bamazwe akhethiweyo banokutyelela eGeorgia ukuba ixesha labo lokuhlala lingaphantsi kweentsuku ezingama-90. La mazwe alandelayo: IOstreliya, iOstriya, iBelgium, iBahrain, iNtsholongwane yokuxhomekeka eBritani - iJersey, iGuernsey, kunye nesiqithi seNdoda, iBulgaria, iCanada, iCroatia, iCyprus, iRiphabhlikhi yaseDenmark, iDenmark, i-Estonia, iFinland, neFrance. Imimandla yase-French Republic, iJamani, iGrisi, iHungary, i-Iceland, i-Israel, i-Itali, i-Kuwait, iLatvia, iLiechtenstein, iLithuania, iLuxembourg, iMalta, iNetherlands, imimandla yaseNetherlands, iNew Zealand, i-Norway, i-Oman, iPoland, iPortugal, i-Qatar, iRomania, I-Saudi Arabia, iSlovakia, iSlovenia, eMzantsi Korea, eSpain, eSweden, eSwitzerland, e-United Arab Emirates, e-United Kingdom ye-Great Britain nase-I-I-Ireland, I-United States yaseMelika, iBritish Overseas Territories- i-Bermuda, ii-Cayman Islands, ii-Britan Islands Islands, ii-Falkland Islands ( Malvinas), Turks kunye Caicos Islands, kunye Gibraltar.
Amaxwebhu ayimfuneko kwi-eVisa eGeorgia
Ifom yesicelo kunye neFoto yokundwendwela
Uxwebhu lokuqala ekufuneka umhambi alufumene kwifom yabo yokwenza isicelo se-visa, kunye nefoto yomenzi-sicelo. Omnye kufuneka aqiniseke ukuba ifoto icacile kwaye umfanekiso womntu ngamnye unokumiselwa ngokulula. Lonke ulwazi olukule fomu kufuneka lungqinelane kunye nalo kwipaspoti.
I-Visa iya kunikezelwa kubafaki-zicelo abanepasipoti eqhelekileyo esemthethweni kwaye ubuncinci bezinyanga ezi-6. Ngokuxhomekeka kwiimeko ezichaziweyo, ukungena nokuhlala komntu lowo kuya kusebenza ngelo xesha. I-visa yokungena kubakhenkethi inikezelwa ukuhlala kangangeentsuku ezingama-30 okanye ezingama-90. Ipasipoti kufuneka okungenani ibe nephepha elinye elingasetyenziswanga lokufaka isitampu.
Abahambi kuya kufuneka banikeze iinkcukacha zezicwangciso zabo zokuhamba kubasemagunyeni abafudukayo. Oku kubandakanya ukufika kwabo okuqinisekisiweyo kunye nokubuya kwamatikiti. Olu xwebhu luza kubavumela ukuba babone ukuba ngubani na umntu ongena kwilizwe elo kunye nomhla abaceba ukumka kuwo.
Ukuba ukwilizwe langaphandle, kubaluleke kakhulu ukuba ube nemali eyaneleyo. Kukho iindleko ezininzi ezifuna ukhathalelo xa undwendwela ilizwe langaphandle, njengokutya, ukuhamba, indawo yokuhlala kunye nenani lezinye izinto. Kukho namathuba kaxakeka kwezonyango. Nokuba imeko iyintoni na, kufuneka ube unayo imali eyoneleyo yokuzixhasa. Ukuqinisekisa oku, ugunyaziwe wokungena kwelinye ilizwe ucela ukuba ubanike ingxelo-mali yakho yeenyanga ezintathu zokugqibela.
Abantu abafaka isicelo seVisa yaseGeorgia Visa (eVisa) kufuneka babonelele ubungqina ngendawo yokuhlala yabo eGeorgia. Abafaki-zicelo kufuneka babonise amaxwebhu afanelekileyo okuba babe yindawo yokuhlala, xa sele bekulo ilizwe. Ezi ndawo zihlala kuzo zinokuba zihotele ezibhalisiweyo, iimoto, indlu yeendwendwe, iikati okanye nayiphi na enye indawo ethe bagqiba kwelokuba bahlale kuyo.
I-Inshurensi yezeMpilo / yokuHamba
Abahambi abasuka kwindawo ye-Yellow Fever kuya kufuneka bagonyelwe kwaye babonise ubungqina bokugonywa. Iindwendwe kufuneka zibe ne-inshurensi yezempilo okanye yeengozi esebenzayo ngexesha lokuhlala kwabo eGeorgia. Ukuba ne-inshurensi kuya kuqinisekisa ukuba xa umhambi egula okanye ehlangabezana nengozi, baya kuba nakho ukuhlawulela iindleko zabo nge-inshurensi.
Yintoni iVisa abakhenkethi yaseGeorgia?
Le yimvume yokuhamba enikwa abantu abanomdla wokutyelela iGeorgia ixesha elifutshane. Abafakizicelo banokufaka izicelo zale Visa kwi-Intanethi.
Yintoni esebenzayo ye-eVisa yaseGeorgia?
Nje ukuba imvume ivunyelwe, isemthethweni isithuba seentsuku ezingama-30 okanye iintsuku ezingama-90 ekungeneni, kuxhomekeke kubume bomfaki-sicelo.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo ukufaka isicelo se-eVisa yaseGeorgia?
Kuya kufuneka ungenise la maxwebhu alandelayo ngesicelo sakho se-visa-ikopi yeenkcukacha zakho, incwadana yokundwendwela, indawo yokuhlala kunye neenkcukacha zesicwangciso sokuhamba.
Ngaba ndifuna ukubonisa naluphi uxwebhu xa ndifika eGeorgia?
Ewe, iindwendwe xa zifika eGeorgia kufuneka zingenise la maxwebhu alandelayo-uxwebhu olubonisa injongo yokuhamba, yokuhamba kunye nencwadi yeinshurensi yezempilo, ubungqina bendawo yokuhlala kunye nengxelo mali.
Luphi uxwebhu endimele ndilunikeze njengobungqina bendawo yokuhlala?
Ukubonelela ngobungqina bendawo yokuhlala, abenzi-sicelo banokunikezela ngeenkcukacha zokubhukisha kwihotele, indlu yeendwendwe okanye yendlu abakhethe ukuba bahlale kuyo.
Leliphi inani lamangeniso elivunyelweyo kwi-eVisa enye yaseGeorgia?
I-eVisa yaseGeorgia evumelekileyo ivumele amangenelo amaninzi. Oku kuthetha ukuba umenzi-sicelo unokundwendwela amaxesha amaninzi e-Georgia kunye ne-visa ayinikiweyo.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti yam ihlangane ukuze ifake isicelo se-eVisa eGeorgia?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa eGeorgia, qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela efanelekileyo ixesha elingangeenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokuhlawula umrhumo we-Georgia eVisa?
Unokukhetha nayiphi na indlela yokuhlawula kwi-Intanethi ukuhlawula umrhumo we-visa. Unokwenza intlawulo usebenzisa ikhredithi esebenzayo okanye ikhadi lebhanki.
Ndingayifumana phi visa yam, nje ukuba isicelo sam samkelwe kwaye sigqityiwe?